Feed Reading Blogroll | WordPress.org မြန်မာ | Burmese
Support » ပလပ်အင်များ » Feed Reading Blogroll
9 years, 1 month ကတည်းက
Blogger Style Blog List လဲ လုပ်ချင်တယ် Yahoo Pipe လုပ်ရမှာလဲ စိတ်ရှုပ်တယ်ဆိုရင် Feed Reading Blogroll Plugin ကို အသံုးြပုနုိင်ပါတယ်။ Plugin အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် အဆင့်အေတာ်များများ ြပုလုပ်ေပးဖို့ လုိအပ်ပါတယ်။ စိတ်ညစ်မသွားပါနဲ့ 🙂 လွယ်လွယ်ေလးပါ။ တဆင့်ြခင်း ေလ့လာြကည့်ရေအာင်….
၁။ ။ ထံုးစံအတိုင်း Plugin ဖိုင်ေတွကို wp-content ထဲကို upload တင်ပါမယ်။ Plugin Active မလုပ်ခင် wp-content folder ကို writable ြဖစ်ေအာင် (chmod 777) ြပုလုပ်ေပးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
၂။ ။ Plugin Activate လုပ်ြပီးရင် Dashboard / Settings ေအာက်မှာ Feed Reading Blogroll ဆိုြပီး ေတွ့ရပါလိမ့်မယ်။ အသံုးြပုေနတဲ့ FTP Program ကိုြပန်သွားပါမယ်။ wp-contnet folder ထဲမှာ feedreading_blogroll.js ဆိုတဲ့ ဖိုင် အသစ်တခု ရှိေနတာ ေတွ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီဖိုင်ကို (chmod 777) ေပးပါမယ်။
၃။ ။ Plugin အသံုးြပုဖို့အတွက် Google API Key လိုအပ်ပါတယ်။ လင့်ခ် အတိုင်းသွားြပီး API Key ကို ရယူပါမယ်။ Dashboard / Settings / Feed Reading Blogroll ကို ြပန်သွားြပီး API Key ကို ြဖည့်ေပးပါမယ်။ ဒါဆိုရင် 50% ြပီးစီးပါြပီ 😛
၄။ ။ API Key ထည့်ြပီးရင် အြခား Setting ေတွကို ြကည့်ရေအာင်။ Blogroll Title for sidebar widget ဆိုတာက ကျွန်ေတာ်တို့ Sidebar မှာ ထည့်ရင် ေခါင်းစဉ်ေပးဖို့ ြဖစ်ပါတယ်။ Link categories ဒီေကာင်က နည်းနည်းအေရးြကီးပါတယ်။ WP မှာ Links ေတွကို categories ခွဲေပးလို့ရတာ သိြကပါလိမ့်မယ်။ ဘယ် link cateories ေတွကို Feed reading Blogroll အေနနဲ့ ြပမလဲ ဆိုတာကို ဒီမှာ ေရွးေပးရပါမယ်။ Default ပါလာတဲ့ Blogroll ကို မေပးချင်ရင် Dashboard / Links / Link Categories မှာ categories အသစ်ြပုလုပ်ေပးရပါမယ်။ ေနာက်တခု လုပ်ေပးရမှာက Display Options အပိုင်းမှာ ြဖစ်ပါတယ်။ ကျွန်ေတာ်ကေတာ့ Show update-information, Show title of latest post, Show icon ,Enable bookmark preview အားလံုးကို check ေပးပါတယ်။ စိတ်ြကိုက်ေြပာင်းြကည့်နိုင်ပါတယ်။
၅။ ။ Plugin settings ေတွကို ချိန်ြပီးရင် Sidebar မှာ ေဖာ်ြပဖို့ widget add ေပးရပါမယ်။ Dashboard / Appearance / Widgets ကိုသွားပါမယ်။ Live Blogroll ဆိုတဲ့ Widget ကို ရှာြပီး add ေပးပါမယ်။
၆။ ။ ေနာက်ဆံုး အဆင့်အေနနဲ့ ေဖာ်ြပချင်တဲ့ Links ေတွကို add ေပးပါမယ်။ Dashboard / Links / Add New ကိုသွားပါမယ်။ ပံုမှန်အတိုင်း Name, Web address ေတွ ြဖည့်ပါမယ်။ Categorie မှာ အဆင့်၄ တုန်းက ေပးထားတဲ့ Categorie ထဲကိုထည့်ေပးရပါမယ်။ ေအာက်ဖက်ကို ဆက်သွားပါမယ်။ Advance ဆိုတာကို ေတွ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ Link ရဲ့ RSS Address ကိုပါ ထည့်ေပးရပါမယ်။ ဒါမှသာ အဆင်ေြပေြပ ေပါ်ပါလိမ့်မယ်။ အားလံုးြပီးစီးပါြပီ။ Blog ရဲ့ Sidebar မှာ Feed reading Blogroll နဲ့ ဂွတ်ေနတာ ေတွ့ရပါလိမ့်မယ် 🙂 ။
The topic ‘Feed Reading Blogroll’ is closed to new replies.
Last reply from: Mg Ogga
Last activity:9years, 1 month ကတည်းက